Waxaa jira wax badan oo dheeraad ah si ay u arkaan, in la ogaado, kalgacayl, inay ku raaxaystaan. Waxaa jira xaqiiqooyin in ay yihiin sidaas u weyn oo ay aan la yarayn karaa si xiiso leh. Ereyada "xiiso leh" "Qaraxa" "kubada" "Xisbiga" dhawaajin doqon in joogitaanka xaqiiqada weyn ugu cabsi badan iyo. Our erayada farxadeed ayaa waxaa hoos u dhigay "oo xiiso leh", sababtoo ah hari dhadhan aawadiis haybadda runta ah ku dhinteen.
Trip sheegay, "Marka ay timaado in anshaxa, oo dhan oo naga mid ah waxay leeyihiin dhadhan xun. "Haa. Oo markuu u yimid inuu Ilaah aan dhadhan lahayn. Sida Trip sheegay, "Waa caadi in indhaha iftiimin ilaa marka aan ka hadlo dhaqanka pop, laakiin glaze badan marka aan ka hadlo Masiix. "Buuraha dhaqanka waa madadaalo. The Himalayas Masiixa daalan yihiin.
Trip Lee doonayo in aad ogaato: Waxaa jira in ka badan hills. Xataa for dhalinyarada waaweyn waxaa laga dheeraad ah. Buuggan waxa ku qoran, waayo, kuwa dhallinyarada ah. Waa qoran tahay rajada kuwa dareemaya in ay leeyihiin wax yar in ay gacan siiyaan. Waxay Xukuntay, waxaa qoran in marka qofka dhalinyarada ah arka, ammaanta Ilaah ayaa wax walba oo isbedel. Waxay kac!
Laakiin kitaabkii waa baaluq. Waxaa la qiimeeyo baaluq ah. Waxaa ixtiraamaya da'da. Trip waa xigmad ka baxsan sano uu. wuu arkaa…
Tani waa hadal Trip ka Summit ERLC ku saabsan Injiilka iyo Dib u Heshiisiinta Racial. Hoos waxaa ku qoran qoraal gacmeedka ka fariinta in. Tani fiidkii, Waxaan ka codsaday in ay hadlaan oo ku saabsan millennials iyo dib u heshiisiinta midab ....
In buugga cusub ee Trip, Kaca, wuxuu isku dayay in uu ka qoro wax la xiriira qarnigan. Daawo sidii uu marayo qaar ka mid ah cutubyada ku socda, oo ku siinayaa peak dhuumasho ee a ...
"Trip ee ku qoran buug aan u malaynayaa in qof kasta oo dhalinyaro u baahan yahay in uu akhriyo. Uu rabitaankiisa Ciise iyo qarnigan yimaado iyada oo cod weyn oo cad bogga kasta. Ma sugi karo si aad u aragto ...
buugga cusub ee Trip, Kaca, waa hadda! Read Hordhac John Piper ee buugga hoos ku qoran. Waxaad ka hor-si kara kitaabka iyo ogaato wax badan oo at Risebook.tv Mid ka mid ah waxyaabaha ugu weyn ee aan jeclahay oo ku saabsan ...
Baridda by Trip Lee
Update baahan yahay
Si aad u ciyaaro warbaahinta aad u baahan doontaa in labada cusboonaysiiso browser in version a dhawaan ama cusboonaysiiso Flash plugin.
Magaca	 Email	 Zip
Me Saxiix Up
Hel Up oo nool Great Ilaah Story